गायक नितेषजंगको प्रष्टीकरण : सर्पोट नपाएपछि यस्तो निर्णय गरेको होइन – Nepal Press
गायक नितेषजंगको प्रष्टीकरण : सर्पोट नपाएपछि यस्तो निर्णय गरेको होइन
२०७८ वैशाख २० गते १८:३९
काठमाडौं । गतसाता गायक नितेशजंग कुवँरले नेपाली संगीतबाट विश्राम लिने बेला आएको भन्दै फेसबुक स्टेटस पोस्ट गरे । उनको यस्तो निर्णयलाई लिएर सामाजिक संजालमा विभिन्न टीका टिप्पणी पनि भए ।
कतिपयले आफ्नो ध्यानाकर्षण गर्न उनले त्यस्तो बोलेको भन्दै आलोचना गरे भने कतिपयले उनको नयाँ करियरको लागि शुभकामना दिए । उनी निकट स्रोतका अनुसार नितेशले आगामी करियर अंग्रेजी गायनमा लगाउने योजना बुनेका छन् ।
आइतबार नितेशले एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै आफूविरुद्ध भएका टीका टिप्पणीको जवाफ दिएका छन् । ‘सर्पोट नपाएपछि मैले यस्तो निर्णय गरेको होइन । मैले बुझेरै, मनन गरेरै यस्तो निर्णय लिएको हुँ’ उनले भनेका छन्, ‘म आज जहाँ छु, तपाईंहरुको माया र सद्भावको कारणले आइपुगेको हुँ । यसमा कसैले चित्त दुःखाउनुपर्ने कारण छैन ।’
उनले प्रत्येक व्यक्तिमा युनिक क्षमता हुने बताउँदै उक्त क्षमतालाई सदुपयोग गर्न समेत उनले आग्रह गरेका छन् । ‘हामी सबै आ–आफ्नो क्षमता अनुसार देशलाई योगदान दिनुपर्छ’ नितेश भन्छन्, ‘यो समयमा हामी हतास नभइकन बस्नुपर्छ र आत्तिनुहुँदैन ।’
पछिल्लो समयमा चल्तीका गायक कुवँरले गत महिना एउटा अंग्रेजी गीत रिलिज गरेका थिए ।
प्रकाशित: २०७८ वैशाख २० गते १८:३९
दशवर्षपछि पुनः संचालनमा आयो आरोहण गुरुकुल (तस्बिरहरु)
माघी सम्झाउने सेलेना गोमेजको त्यो विश्वचर्चित फोटो !
‘चपली हाइट ३’ कमजोर ओपनिङ : कन्टेन्ट वा ओमिक्रोन कारण ?
नेटफ्ल्क्सिको नेपाली फिल्म ‘फोर्टिन पिक्स’ बाफ्टा अवार्ड मनोनयनमा
सपना कसरी पाइरेसी हुन्छ : यस्तो छ ‘चिसो एस्ट्रे’ फिल्मको गीतभित्र लुकेको उत्तर (भिडिओ)